Wasaaradda Dastuurka DKMG ah oo Shaaca Ka Qaaday inaysan Wax Dhaqaale u Heyn Shirka Dastuurka Lagu Ansixinayo | Anti-Tribalism
← Musharaxa Madaxweynaha Soomaaliya Prof.Warfaa oo wareysi xiise leh siiyey Somali Channel (DAAWO)
Raysul Wasaare Gaas oo Laga Dalbaday Inuu Raaligelin ka Bixiyo Hadal uu Shalay Jeediyey →
Wasaaradda Dastuurka DKMG ah oo Shaaca Ka Qaaday inaysan Wax Dhaqaale u Heyn Shirka Dastuurka Lagu Ansixinayo
Muqdisho Wednesday, April 25th, 2012 (RBC) – Wasiirka wasaaradda dastuurka ee xukuumadda KMG Soomaaliya C/raxmaan Xoosh Jibriil ayaa caawa shaaca ka qaaday in wasaaradiisu aysan faraha ke heyn illaa hadda wax dhaqaale ah oo loogu talagay socodsiinta dhameystirka dastuurka, xulista ergooyinka shirarka ka qeybgalaya iyo diyaarinta baarlamaanka cusub oo ay ahayd in dhaqaale loo helo.
War saxaafadeed caawa ka soo baxay xafiiska wasiirka oo nuqul ka mid ah soo gaaray Shabakada ayuu wasiirku ku sheegay in illaa hadda Dawlada aysan helin dhaqaalihii beesha caalamka ay ballanqaaday ee loogu talagalay in lagu fududeeyo imaanshaha ergooyinka gobolada siay u diriyaan xulista golaha dastuuriga oo ka kooban 825 ruux oo iyaguna xuli doona baarlamaanka cusub, isla markaana ansixin doona dastuurka qabyada ah.
War saxaafadeedka wasaaradda dastuurka ayaa u qornaa sidatan;-
XAFIISKA WASIIRKA DASTUURKA XUKUUMADDA FEDERAALKA KUMEEL GAARKA AH
• Boqolkiiba Lixdan iyo Shan (65%) Issimadu waxay ku sugan yihiin Muqdisho, oo ah xarunta Shirka Dastuuriga ah ee Soomaaliyeed.
• Xukuumaddu waxay diyaarisay oo cayimtay Liiskii iyo Degaamada Issimada dhiman ku sugan yihiin iyo qaabkii looga soo qaadi lahaa.
• Xukuumaddu waxay bilowday suggidda amniga, diyaarinta iyo kormeerada Xarumaha Martigelinta iyo Shirarka.
• Beesha Caalamka waxaan ugu baaqyenaa in ay dedejiyaan, fuliyaana balanqaadkii dhaqaale ee ay ugu talo galeen shirarka Dastuuriga ah.
• Xukuumadda waxay shacabka Soomaaliyeed ugu baaqeysaa in ay taageeraan kuna soo dhoweeyaan niyad sami Shirarka Dastuuriga ah.
• Shirku wuxuu u furmayaa si dhaqso ah; markii ay soo dhameystirmaan Issimada, Wabarada iyo Boqor ada Soomaaliyeed oo la filayo in ay ku soo dhameytirmaan maalmaha soo socda
Dowladda waxay ku boorineysaa ergada ka imaan doonta dalka oo idil inay muujiyaan wadaninimo iyo xilkasnimo taas oo ay ku xaqiijinayaan soo af-jarida mududa ku-meel-gaarka ee ku eg August 20, 2012….DHAMAAD
Aaminaad darrida DKMG ah
Ilo wareedyo ku dhow xafiisyada Qaramada Midoobay ee UNDP iyo UNPOS oo masuul ka ah fududeynta shirarka loogu gogol xaarayo ka bixida marxalada KMG ah ayaa sheegaya inuu jiro shaki weyn oo laga qabo saraakiisha DKMG ah oo ku saleysan xisaabcelin la’aan dhanka maaliyada sidaasi darteedna illaa hadda hay’adaha Qaramada Midoobay waxay diidan yihiin in lacag toos ah ay u dhiibaan wasiirada dawlada ee gacanta ku haya hawlaha sameynta dastuurka iyo isu keenista ergooyinka oo hadda magaalada Muqdisho ka socota.
Dhowaan ayaa xafiiska raysul wasaare C/weli Gaas wuxuu warqad u diray xafiisyada beesha caalamka ee sida gaarka ah u ballanqaaday bixinta kharashaadka ku baxaya dhameystirka roadmap-ka iyo dastuurka cusub isagoo ka codsaday inay fasaxaan wixii dhaqaale ah ee ay horey u yabooheen laakiin dalabkasi hay’adaha way ka gaabsadeen.
Sarkaal u shaqeeya laanta horumarinta UNDP ee la shaqeeya DKMG ah oo Raxanreeb u xog waramay ayaa u aaneeyey sababta dalabka raysul wasaaraha looga jawaabi waayey in uu jiray qodob ku jiray heshiiskii London ee 23-kii Febraayo kaasoo sheegayey in uu jiri doono guddi beesha caalamka iyo DKMG ah oo si wadajir ah ula socon doona maareynta dhaqaalaha la siinayo dawlada halka dawlada laga rabo inay xisaabcelin ka soo sameyso dhamaan maaliyada ka soo gasha dekeda iyo garoonka Muqdisho. Waxayna u muuqataa in labada arimood hadda ay isku xiran yihiin.
Baaqa qeylodhaanta ee ka soo yeeray wasaarada dastuurka FKMG ah ayaa ku soo beegmaya iyadoo magaalada Muqdisho ay isugu keentay dawlada ergooyin ka kala yimid dalka iyo dibadda kuwaasoo u jooga ka qeybgalka shirka dastuurka oo Muqdisho ka furmi doona dhamaadka bishan. Sidoo kale ansixinta dastuurka qabyada ah iyo xulista baarlamaanka cusub ayaa lagu qaban doonaa Muqdisho.
Waxaana qeylada dhaqaale la’aanta loo arkaa mid saameyn ku yeelan karta habsami u socodka hawlaha horyaala xukuumadda iyo ergooyinka faraha badan ee magaalada lagu soo xareeyey.